Mee Ka Ọganihu Gbanwee Mee Ka Ọganihu Gị Mee
Ugbu a na i nwere ike inwe ihe ịga nke ọma, e nwere otu ihe dị mkpa: ịme ọsọ ọsọ gị.
Maka nzube dị aṅaa? Mee ka ohere nke ịga nke ọma rụọ ọrụ gị.
Dị ka anyị niile maara, iru ihe mgbaru ọsọ gị abụghị ọrụ dị mfe, maka nke ahụ, anyị chọrọ ndụmọdụ ndị ga-enyere anyị aka ịghọta ha.
Mee ka ọkwa gị nke ọma ọ bụ nzọụkwụ a gaghị eleghara anya! N'ezie, ọ bụghị mgbe niile dị mfe, ha bụ obere ihe na-agbakọta na nke ahụ ga-ebubata ihe na-esi na mmụọ gị na ihe mgbaru ọsọ gị. Ọ dịghị onye na-achọ ka ọ bụrụ onye aka ya. Lelee obere vidiyo nke 3 min wee chọpụta ntụziaka ga-eme ka ihe ịga nke ọma gị dịkwuo mfe!
Na vidiyo a, ị ga-ahụ echiche na ndụmọdụ ndị ga-eme ka ị nwekwuo ọsọ nke ihe ịga nke ọma gị iji ruo ihe mgbaru ọsọ gị ..., na ihe niile, naanị 5 isi:
1) Ihe doro anyaé : Ịkọwa nzube gị dị mkpa, ọ bụ ihe ndabere.
2) Nkwa : ụbọchị bụ nanị 24 awa, oge eruola ịmalite!
3) gburugburu ebe obibi : ịmepụta ihe na-elekọta gị na-eme ka ihe ịga nke ọma.
4) Ime mgbanwe : nata nkatọ ka ị na-enwekwu ọganihu, ọ nwere ike inyere gị aka ịlaghachi n'ụzọ ziri ezi.
5) Njikọ ahụ / n'uche : a maara nke ọma na a na-ejikọta uche na ahụ ahụ, jide n'aka na ọgwụgwọ dị!
Site na ndụmọdụ ndị dị mfe a ga-etinye n'ọnọdụ, ị ga-enwe
niile kaadị n'aka gị, ekwela ka onwe gị merụọ ma gaa n'ụzọ nke ịga nke ọma!
GỤỌ Ịga nke ọma mgbe ọdịda
Mee ka ogo gị dịkwuo mma iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị. Mee 12th, 2018Tranquillus
gara agaAtụmatụ Excel Akpa Nkebi-Doping Your Productivity
-esonụMụtakwuo ngwa ngwa ma mee ka ọ dị mma na-emetụ n'ahụ ndị nwụrụ anwụ